ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ” ဇာတ်ကားရဲ့ Official Trailer ထွက်ရှိလာ – Cele Gabar
in Cele News, News
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့နေတိုးနဲ့ တက်သစ်စမင်းသမီးချောနေခြည်ဦးတို့ကို အတူတွဲပြီးတော့ မြင်တွေ့ရမဲ့ဇာတ်ကားကတော့ “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ” ဇာတ်ကားပါပဲ။ဒီဇာတ်ကားစာ Romantic Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ” ဆိုတာကို ဘယ်လိုဖော်ညွှန်းသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်တစားစောင့်မျှော်နေကြတာပါ။အခုဆိုရင်ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Official Trailer ကတော့ ထွက်ရှိလာပါပြီ။
ဒီဇာတ်ကားမှာ လိပ်ပြာဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့နေခြည်ဦးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး လိပ်ပြာလေးကို အရမ်းတွေကြွေနေရတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးတက်လူနိုင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာကတော့ မင်းသားချောနေတိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ လိပ်ပြာကိုကြွေနေတဲ့ ဦးတက်လူနိုင်တစ်ယောက်ကတော့ ညဏ်တွေဆင်ပြီးသူ့အနားမှာအလုပ်ခန့်ထားတော့မှာပါ။ အနေနီးတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာ ချစ်ပဲချစ်မိသွားမလား? ဘယ်လိုပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမလဲကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
နေခြည်ဦးကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ လေးကားမြောက်ဇာတ်ကားအနေနဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဇာတ်ရုပ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျမှုဘယ်လောက်အထိရှိမလဲဆိုတာပရိသတ်က စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။အခုဆိုရင်မျှော်လင့်နေကြတဲ့ Trailer လေးထွက်လာသလို ဇာတ်လမ်းလေးကဘယ်လိုတွေရိုမန်တစ်ဆန်မလဲဆိုတာက ပရိသတ်ကိုပိုမိုရင်ခုန်စေခဲ့ပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အောက်တိုဘာလ(၁၇)ရက်နေ့ရုံတင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ခြည်ခြည်နဲ့နေတိုးရဲ့ပရိသတ်တွေသာမက အချစ်ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေသွားကြည့်သင့်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
Source:7th Sense Creation
ပရိသတ္ေတြစိတ္၀င္စားေနတဲ့ “အခမ္းနားဆံုးေမတၱာ” ဇာတ္ကားရဲ႕ Official Trailer ထြက္ရွိလာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထိပ္တန္းမင္းသားတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ေနတိုးနဲ႔ တက္သစ္စမင္းသမီးေခ်ာေနျခည္ဦးတို႔ကို အတူတြဲၿပီးေတာ့ ျမင္ေတြ႕ရမဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ “အခမ္းနားဆံုးေမတၱာ” ဇာတ္ကားပါပဲ။ဒီဇာတ္ကားစာ Romantic Drama ဇာတ္ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး “အခမ္းနားဆံုးေမတၱာ” ဆိုတာကို ဘယ္လိုေဖာ္ၫႊန္းသြားမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြကစိတ္၀င္တစားေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာပါ။အခုဆိုရင္ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ Official Trailer ကေတာ့ ထြက္ရွိလာပါၿပီ။
ဒီဇာတ္ကားမွာ လိပ္ျပာဆိုတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္မေလးအျဖစ္နဲ႔ေနျခည္ဦးကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး လိပ္ျပာေလးကို အရမ္းေတြေႂကြေနရတဲ့ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးတက္လူႏိုင္အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာကေတာ့ မင္းသားေခ်ာေနတိုးျဖစ္ပါတယ္။ဒီဇာတ္ကားမွာ လိပ္ျပာကိုေႂကြေနတဲ့ ဦးတက္လူႏိုင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ညဏ္ေတြဆင္ၿပီးသူ႔အနားမွာအလုပ္ခန္႔ထားေတာ့မွာပါ။ အေနနီးတဲ့သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ခ်စ္ပဲခ်စ္မိသြားမလား? ဘယ္လိုပဋိပကၡေတြျဖစ္လာမလဲကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။
ေနျခည္ဦးကေတာ့ ဒီဇာတ္ကားဟာ ေလးကားေျမာက္ဇာတ္ကားအေနနဲ႔ထြက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔အံ၀င္ခြင္က်မႈဘယ္ေလာက္အထိရွိမလဲဆိုတာပရိသတ္က စိတ္၀င္စားေနၾကတာပါ။အခုဆိုရင္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ Trailer ေလးထြက္လာသလို ဇာတ္လမ္းေလးကဘယ္လိုေတြ႐ိုမန္တစ္ဆန္မလဲဆိုတာက ပရိသတ္ကိုပိုမိုရင္ခုန္ေစခဲ့ပါၿပီ။ ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔ရံုတင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျခည္ျခည္နဲ႔ေနတိုးရဲ႕ပရိသတ္ေတြသာမက အခ်စ္ဇာတ္လမ္းႀကိဳက္သူေတြသြားၾကည့္သင့္တယ္လို႕ ဆိုရမွာပါ။
“ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံး နားရက်မရှိဖျော်ဖြေရေးတွေဆက်နေတဲ့ ချမ်းချမ်း”
“တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲလေးမှာ သမီးလေးနဲ့အတူ ဆယ်ကျော်သက်အဆိုတော်တွေကိုပါပွဲထုတ်သွားမယ့်မီးမီးခဲ”
“ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် မေဦးနဲ့ ပြတ်ဖို့အတွက် စဉ်းစားထားတဲ့ ဟန်လင်း”